Noqo Kaaliyaha Aragga Cradle - View Cradle
U noqo qoraa Blog Anime ee Muuqaalka Cradle
Muuqaalka Cradle waa goob si xawli ah u fidaya waxaana had iyo jeer raadineynaa inaan ka korno aag kasta oo aan awoodno. Dhammaanteen waxaan nahay wax ku saabsan Anime, iyo haddii Anime uu yahay wax aad wax badan ka taqaano ama aad xiisaynayso, markaa Cradle View waa meesha la joogo. Taasi waa sababta oo ah Cradle View kaliya kuma eka inay ku fido goobta mareegaha, laakiin meelo badan oo kale sidoo kale, sida Warbaahinta Bulshada, Wararka, Warbaahinta Daabacaada, Soo saarista, Ganacsiga, iyo Alaabooyin kale oo badan iyo adeegyo.
Waxaan ku faanaa maqaalladeena iyo qoraaladayada blogyada laakiin mararka qaarkood ilaalinta ma fududa. Qorista maqaallo faahfaahsan oo sarreeya iyo qoraallada ROI iyo qoraallada blog waxay noqon karaan hawl culus, gaar ahaan marka aad isku dayayso inaad ka baxdo meelaha kale. Taasi waa sababta aan ula shaqeyno shaqaale badan oo madax-bannaan iyo qoraa qandaraas ku salaysan si aan u ilaalino nuxurkayaga.
Haddaba sidee ku ogaan kartaa in booskani runtii kugu habboon yahay iyo tan ugu muhiimsan, maxaa adiga kugu habboon? Taasi waa waxa boggani halkan u yahay in la sameeyo maadaama dhammaan FAQ-yada muhiimka ah ee ku saabsan ka shaqaynta/la shaqaynta Cradle View looga jawaabi doono boggan.
Intee in le'eg ayaan ka dhigi karaa qoraalka Cradle View?
Waxaan ku siinnaa lacag bil kasta si ku saleysan maqaal kasta. Tani waxay ka dhigan tahay inaanu ku siinno maqaal kasta oo aad qorto, waxaanu ku siin doonaa qadar ku salaysan inta kelmadood ee ku jira maqaalka, nuxurka maqaalka, iyo haddii ay tahay SEO saaxiibtinimo iyo haddii kale. Waxaan bixinaa qiimo siman inta badan maqaallada laakiin MAYA bixi wax ka badan lacagta caadiga ah bil kasta.
Maqaal kastaa waa inuu ka badan yahay 500 oo kelmadood si aad xaq ugu yeelatid in lagu dhejiyo waxaana lagu siin karaa oo kaliya haddii maqaalku u qalmo. Maqaallada xaqa u leh waxaa lagu qeexaa kaliya iyadoo lagu salaynayo tirada erayada maqaalka. Go'aanka uu go'aaminayo ama yaanay ahayn qodob waa mid xaq u leh iyo in kale kuma saleysna go'aanka CV-giisa oo keliya. Sidaan horay u sheegnay waxay ku saleysan tahay tirada erayada maqaalka.
Tusaale: Haddii aad noo qorto 7 maqaal oo mid walba uu leeyahay celcelis ahaan $ 5.00, markaa waxaanu ku siin doonaa $ 30.00 bishaas laakiin wax ka badan $ 50 bishaas. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qortay Qalabka 28 dhammaan qiimaha celceliska ah $ 5.00, waxa kaliya oo aad heli doontaa lacagta ugu badan $ 50.00 inkastoo 28 x 5 ay tahay 125 - tani waa sababta oo ah ma bixinno wax ka badan $ 50 bishii haddii aad tahay qoraa markii ugu horeysay ee muddada tijaabada ah (3 bilo). Isla sharciga ayaa quseeya laakiin lacagta ugu badan ayaa lagu kordhinayaa $80 haddii aad dhameysatay 6 bilood oo shaqo ah iyo $ 100 mar aad shaqeysay nus sano.
Si loo caddeeyo:
Markii ugu horeysay 3 bilo (muddada tijaabada) waxay filayaan inay sameeyaan $ 5.00 Maqaal kasta, oo aan ka badnayn $ 50.00 bil guud ahaan.
Ka dib markii ay 3 bilo ayaa lagu siinayaa $ 10 Maqaal kasta oo aan ka badnayn $ 80.00 bil guud ahaan.
Ugu dambeyntii markaad dhameyso 6 shaqo bilo ah ayaa lagu siin doonaa $ 20.00 Maqaal kasta oo aan ka badnayn $ 100.00 bil guud ahaan.
Waxaan leeyahay degel, sidee bay View Cradle ii caawin kartaa?
Waxaan ku faannaa in aan la shaqeyno boggaga kale sida kuwayada oo kale! Markaa haddii aad leedahay goob la xidhiidha Anime oo daabacda nuxurka baaxadda Anime, fadlan tixgeli inaad saxeexdo si aad wax ugu biirto boggayaga. Cradle View waxay leedahay DA si joogto ah u kordheysa, waxaanan siinaa qorayaasha iyo milkiilayaasha goobta fursad ay noogu qoraan maqaallo oo maqaalkii asalka ahaa dib ugu xirnaado boggayaga. Waxaan dib ugu soo celin doonaa goobtaada inta jeer ee aad rabto waxaadna isticmaali kartaa goobta Cradle View si aad u qayliso oo aad u kordhiso soo-socda boggaaga iyo wacyigelinta sumadda.
Dhismaha maamulka Domain-ka ayaa aad muhiim ugu ah goobtaada waxayna muhiim u tahay helitaanka isticmaalayaasha cusub. Cradle View waxay ku siin doontaa fursad aad dib ugu xidhidhdo goobta mar horeba laga dhisay Anime niche. Xiriirinta ayaa xoojin doonta labada goobood ee ku lugta leh waana habsocod qiimo leh marka miraha la dhigo oo waxa ku jira la soo saaro. Markaa haddii aad jeclaan lahayd inaad wax u qorto Cradle View fursada in macluumaadkaaga lagugu xidho goobtaada dabadeed fariin noo soo dir adigoo isticmaalaya foomka waxaanu kuugu soo celin doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaan rabaa in aan noqdo maamulaha goobta, tani suurtagal ma tahay?
Waxaan raadineynaa maamulayaal ka caawiya socodsiinta Cradle View, dhamaystirka hawlahan iyo hubinta in wax laga qabto waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah hawlgalka goobta iyo dabcan waa door muhiim ah oo qaadaya masuuliyad badan. Sababtaas awgeed, qofna kuma shaqaalaysiinno si fudud, waxaanan u baahanahay macluumaad qoto dheer oo ku saabsan naftaada iyo khibradaada iyo danahaaga shakhsi ahaaneed. Fadlan nagula soo xiriir email ahaan haddii tani ay tahay wax aad xiisaynayso.
Ma hubo in nuxurkaygu uu dhaafi doono hubinta wax ka beddelka
Ha werwerin! Tani waxay dhacdaa mar kasta. Qorayaal badan iyo wariyeyaal u shaqeeya Washington Post iyo New York Times ayaa lagu soo bandhigay dhibaatada ah in wax kasta oo ay qoraan si adag loo hubiyo loona tafatiro. Si kastaba ha ahaatee, Cradle View arintu maahan. Waxaan ogolaneynaa ra'yi dhiibasho xor ah si ay u xukumaan shaqadaada. Waxaa jira dhowr tilmaamood oo ay tahay in aad raacdo marka aad shaqo qorayso iyo marka aad si sax ah u hubiso, shaqadaada waxaa la soo gudbin doonaa ku dhawaad ​​isla markiiba, iyada oo ku xidhan sida aad doorato in aad u dhejiso. (Waxaan doorbidnaa inaan jadwal u sameyno qoraallada iyo maqaallada marka ay suurtagal tahay).
Hoos ku qor
Sharaf bay ahaan lahayd inaad nala shaqeyso. Waxaan nahay madal waligeed koraysa, joogitaankayaguna waa halkan inaan joogno. Haddii aad rabto inaad nala shaqeyso waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad awooddo. Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan la shaqeyno bogagga kale oo aan la xiriirno meelaha u dhow. Doorashada hadda adigaa leh, hoos kala xiriir.
Hoos waxaa ku yaal foom fudud oo aad isticmaali karto si aad isu diiwaangeliso oo aad boos u codsato.